घामले छाला डढाएको छ? काँक्रो बन्छ उपयोगी, अरु पनि छन् धेरै फाइदा | latestnepali.com
घामले छाला डढाएको छ? काँक्रो बन्छ उपयोगी, अरु पनि छन् धेरै फाइदा
जुनसुकै समयमा पनि सलादको रुपमा प्रयोग गरिने फल हो काँक्रो । प्रशस्त मात्रामा पानी पाइने हुँदा काँक्रो गर्मी समयमा अझ बढी रुचाइन्छ।घरदेखि रेस्टुरेन्टसम्म यो सलादको रुपमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ।
बिहान उठान बितिकै यस्ता गल्ति नगर्नुहोस